Baaris dheeraad ah oo lagu sameeyo magangelyo doonka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kiisas 20 000 kor u dhaafaya oo Säpo loo gudbiyey. sawir: TT. Montage: Sveriges Radio.
Oskar Ekblad, madax waaxeed ka howl-gala hayadda socdaalka. sawir: Foto: Migrationsverket/Tomislav Stjepic
Baaris dheeraad ah oo lagu sameeyo magangelyo doonka
"Waxay kor u qaadaysaa ammaanka dalka"
La daabacay tisdag 19 september 2017 kl 10.49
Wakaaladda socdaalka ayaa kordhisay wada-shaqeeyntii ay la lahayd hayadda nabad-sugidda. Middaasi oo looga gol leeyahay sidii lagu heli lahaa dadyoowga halistak u ah ammaanka dalka.
Laga bilaabo bishii luulyo ee sannadka ayaa loo diri doonaa hayadda nabad-sugidda xogagta qaarkood dhammaan dadka magan-gelyada ka dalbada Sweden.
Illa iminka ayey tiradoodu kor u dhaaftay 20 000 xogagta ay wakaaladda socdaalku u dirtay ciidanka nabad-sugidda.
–Laga bilaabo kuleeylihii waxaannu bilowney in aannu xogta kontroolno, middaasina oo ciidanka nabad-sugidda suurtagal u siinaysa iney helaan xogta dhammaan dadyoowga deggenaanshaha ka dalbada Sweden. Ma ahan oo kleiya dadyoowga magan-gelyo doonka dalka u yimaada waxaa kaloo ku jira dadyoowga deggenaanshaha ku soo dalbada sidii ey ula midoobi lahaayeen qaraabadood, shaqa doonka iyo ardeyda, sida uu sheegay Oskar Ekblad, madax waaxeedka arrimmaha khaaska ee wakaaladda socdaalka.
Maxaa nooga sheegi kartaa war-bixinnada aad u gudbisaan ciidammada nabad-sugidda?
–Waxey la xiriiraan nooc xogta ka mid ah oo ciidanka nabad-sugiddu ku qiimeeyn karaan shakhsiyaadka, tusaale ahaan xogta magaca qofka iyo xogag kale oo aanan halka ka sheegi karin, sida uu sheegay Oskar Ekblad.
Tallaabadan wada shaqeeyn ee wakaaladda socdaalka iyo ciidanka nabad-sugidda ayaa ka dambeeysay heshiis ey wada gaareen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka garabka midig ee Alliansen bishii juun ee sannadka, heshiiskaasi ayaa salka ku hayay howlaha ka hor tagga argagixisada, hase yeeshee diyaarintuuse ay ka horreeysay.
Wixii intaa ka horreeyey ayaa tijaabooyinka (kontaroollada) noocan ah la qaadi jirey kolka muwaadin-nimada dalka (baasaboorka wayn) la dalbado. Kolka laga hadleyo sharciga deggenaansho waxay wakaaladda socdaalku xog u diri jirtay ciidammada nabad-sugidda haddii shakhsi looga shakiyo inuu halis ku yahay ammaanka dalka.
Sannadkii 2016 waxaa ciidanka nabad-sugidda loo gudbiyey xog qiyaastii gaarsii-san 700.
Ciidanka nabad-sugidda ma loo gudbiyey kiiskaaga?